Inaliti yokuqoqwa kwegazi, izinto ezisetshenzelwa elabhoratri, Isitsha se-Urine - Kang Weishi
IShijiazhuang Kang Weishi Medical isungulwe ngonyaka ka-2014 njengenkampani yabakhiqizi nabahwebi. Siyiqembu elinamandla futhi ukhetha ngokucophelela imikhiqizo yekhwalithi ezokwethulwa kumakhasimende ethu.
Ukuqoqwa kwamasampula egazi e-vacuum venous kungukuthuthuka okukhulu ngezindlela zokuqoqa igazi zendabuko. Ngoba inqubo yokuqoqa igazi igcwaliswa ngaphansi kohlelo oluboshwe ngokuphelele, amathuba okungcola kwegazi nokutheleleka ngokuyisisekelo awafakwa ngokuyisisekelo; futhi ngenxa yesakhiwo saso esilula nokusetshenziswa okulula, kulula ukulenza futhi likukhuthaze.
Amashubhu wokuqoqa igazi amancane
Amashubhu wokuqoqa igazi amancane: alungele ukuqoqwa kwegazi ezinganeni ezisanda kuzalwa, ezinsaneni, ezigulini ezihluleka ezingxenyeni ezinakekela abaguli, kanye neziguli ezivuthayo ezingakulungele ukuqoqwa kwegazi venous.
Lolu uhlelo lokuqoqa isampula ye-othomathikhi ye-othomathikhi ehlanganisa ulayini, ukukhethwa kwe-smart tube, ukuphrinta kwelebuli, ukunamathisela nokusabalalisa. Uhlelo luxhumeke kwinethiwekhi yesibhedlela ye-LIS / HIS, lufunda ikhadi lezokwelapha lesiguli, lutholakale ngokuzenzakalelayo imininingwane ehlobene neziguli nezinto zokuhlola, bese lushintsha izindlela zokuqopha nezokulebula ngokwesiko.
Isampula Yegciwane Elahlekayo
Ilungele ukuqoqwa, ukuthuthwa kanye nokugcinwa kwamasampula wegciwane. Gcina leli gciwane liphephile futhi liphelelwa yisikhathi.
IShijiazhuang Kang Weishi Medical Instrument Co, Ltd isungulwe ngonyaka ka 2013, itholakala No.95, Yuanshi County, Shijiazhuang City, Hebei Province, Le fektri icishe ibe yizwe elikhulu lomgwaqo omkhulu u-107, Inkampani yethu ngumkhiqizi wesimanje wamashubhu wokuqoqa igazi namadivayisi ezokwelapha Inkampani yethu iyayithanda imithetho yokuziphatha yebhizinisi nekhwalithi ephezulu futhi ilwela ukuthuthukisa imikhiqizo ngekhwalithi ephezulu. Siphishekela imikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nezinsizakalo zochwepheshe bokuxilonga bomhlaba wonke futhi sihlose ukuhlinzeka ngokuqinisekiswa kwekhwalithi okuqinisekile kokuxilongwa kwezempilo.
Senginazo izitifiketi ze-CE neze-ISO 13485
Yamukela insiza ye-OEM ne-ODM
Imigqa emine yokukhiqiza ukugcina ukuphuma okuphezulu.
Bamba iqhaza kwimibukiso eyaziwayo embonini, efana ne-CMEF, MEDICA, HEALTH HEALTH, njll.
Ikakhulu eMiddle East. I-Afrika, iNingizimu Melika, iSoutheast Asia kanye neSouth Asia.
Izinzuzo zomshini wokubhalwa kwelebula okuzenzakalelayo kwekhanda
Umshini obizwa ngokuthi yi-automatic labeling umshini wokurekhoda ikhanda, ngokuvamile obizwa ngokuthi izinga eliphakeme lemishini yokufaka amalebula ezenzakalelayo, ikakhulukazi ukulawulwa kwe-servo (PLC), izinhlaka ezahlukahlukene ezisebenzayo nomshini wokulebula okuzenzakalelayo sewenziwe ngcono. Ijubane lokulebula (1) I-semi-automatic labeling ma ...
Izinaliti zegazi zingahlukaniswa zaba yilokhu: 1. Inaliti yokuqongelelwa kwegazi engangeneki: inaliti eqondile esika nhlangothi zombili nenaliti eqinile yensimbi; I-Pierce isikhumba se-distal noma isikhumba sezimpande sonyawo lomntwana ukuthola umkhondo wegazi. Amaseli wegazi kanye ne-biochemical, i-histological, i-microbiological, virological, kanye ne ...
Ukuhlukaniswa, umbala, ukusetshenziswa nokuhleleka komdwebo wegazi wemithambo ye-vacuum
Ukuqoqwa kwegazi le-vacuum iqoqo legazi le-vacuum negative pressure, ukuvela kwenqwaba yemishini ezenzakalelayo kanye nokuhlolwa kwezokwelapha kwanamuhla kwezidingo zokulondolozwa kwegazi, hhayi kuphela ubuchwepheshe bokuqoqa igazi oludingekayo, kodwa futhi nezimfuneko zokuqoqeka kwegazi vacuum ...
Ukuthuthukiswa kwemikhiqizo emisha ngesikhathi seCoronavirus
I-Shijiazhuang Kang Weishi Development Development Medical imikhiqizo emisha ebizwa nge-Disposable Virus Sampling tube, le mikhiqizo ilungele ukuqoqwa, ukuthuthwa kanye nokugcinwa kwamasampula wegciwane. ...
Inqubo yokuqoqa igazi
Umkhumbi wokuhlanganisa = ishubhu elijwayelekile legazi → ishubhu lokudonsa kwegazi → ishubhu le-biochemical. Qaphela: I-tube ejwayelekile yegazi kumele iqoqwe kushubhu yesibili noma kunjalo (ishubhu yegazi iyishubhu yesithathu lapho isiko legazi lithandwa kakhulu), ngaphandle kwento evamile yegazi. Yonke ithole lokuqoqa igazi ...